သီချင်းတပုဒ်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » သီချင်းတပုဒ်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ	13
Posted by ムラカミ on Jun 29, 2015 in Entertainment, Music, My Dear Diary | 13 comments
ဒီဂျုပ်လှော်ဗီ အန်တီ ဂွ.. အဲလေ အန်တီ မျဆာဂယေး ကို အားကျလို့ သီချင်းတပုဒ် အကြောင်း တင်ဆက်ပရစေ။
မော်ဒန် ကလပ်စစ် သီချင်းတပုဒ် အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ကဲ .. စပြီ။
ဒီသီချင်းကို ရွာသူားတွေ နားရည်ဝနေပြီးသားပါ..။
(နားရည်ဝပြီးသားဆို ကော်ပီသီချင်းကလည်း နာမည်ကြီးတာကိုး သည်အကြောင်းအောက်မှာ ပါပါမယ်။ )
Every Breath You Take အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်။
သည်သီချင်းက ဗြိတိသျှ Rock band “The Police” က ရေးစပ် သီဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
The Police ဆိုတာက အမေရိကကို ထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ဗြိတိသျှ Rock Band လို့ ပြောကြပါတယ်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အလွန် ကျော်ကြားပြီး နောက်ပိုင်း Rock ဂီတသမားတွေအပေါ်မှာ အတော်ကြီး လွှမ်းမိုးမှု ရှိတဲ့ Band
ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့သည့် Band ကနေ နာမည်ကျော် အဆိုတော် Gordon Matthew Thomas Sumner လို့ခေါ်တဲ့ String ဟာ
သည်သီချင်းရဲ့ သီဆို ရေးဖွဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်သီချင်းရေးဖြစ်ပုံအကြောင်း သူပြောပြတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။
တညမှာ ရုတ်တရက် သူနိုးလာတယ်.. ပီယာနိုပေါ်ထိုင်ပြီး နာရီဝက်အတွင်း အပြီးရေးခဲ့ပါသတဲ့…။
သီချင်းစာသား ကတော့ အောက်က အတိုင်းပါ။
သီဖွဲ့မှုကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်.. Bass Guitar frame ထဲမှာ Lead Guitar ကို အပေါ်ကြိုးတွေ ကို Mute position နဲ့ arpeggios တီးထားတာပါ..။
Drums ကိုတော့ snare နဲ့ gong ကိုပဲ ပုံစံကျ အားပြုတီးခတ်သွားတာပါ။ Solo မရောက်ခင် Chorus အဆင်းမှာတော့
ရိုးရှင်းတဲ့ Piano တချောင်းထိုး တီးခတ်သံ နဲ့ Electric Guitar ကို Chord နင်းသံတွေလောက် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
သည်သီချင်းကို Music Video ရိုက်တော့ ၀ိုင်းမန်ဘာ အချင်းချင်း တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတာ ရိုက်ကူးရေး နားရသေးတာ
အမှတ်တရပါ။ သည်အချက်တွေကြောင့်ပဲ နောင် တချိန်မှာ Sting ဟာ Solo Career ကို စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
သည်သီချင်းရဲ့ Music Video ကတော့ အောက်က link မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
” I’ll Be Missing You “
နောက်တပုဒ် ဆိုပေမယ့် ပထမသီချင်း Every Breath You Take ရဲ့ Chorus ပိုဒ်ကို ယူပြီး သုံးထားတဲ့ Rap သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Chorus ရဲ့ နောက်ဆုံး စာသား I’ll be watching you ကို I’ll be missing you ဆိုပြီး ပြောင်းတာလေးကလွဲလို့ပေါ့..။
ဒီသီချင်းကို ဖန်တီးခဲ့သူကတော့ ခေတ်သစ် Hip Hop လောကမှာ အလွန် သြဇာကြီးတဲ့ Puff Daddy ဖြစ်ပါတယ်။
သည်သီချင်းရဲ့ စာသား အစအဆုံးကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သည်သီချင်းဟာ ဂရမ်မီဆုတွေရရှိခဲ့ပြီး အလွန် ကမ္ဘာအနှံ့ အလွန် ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သည်သီချင်းလေး ပေါ်ပေါက်လာပုံကလည်း ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းတခု အသတ်ခံခဲ့
P.Daddy ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ the Notorious B.I.G ကို ဂုဏ်ပြု ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း တယောက်က ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း ကို လွမ်းတဲ့ သတိရတဲ့ အကြောင်းပေါ့…။
(ဆေးကိစ္စနဲ့ ရှော့ခံထိပြီးတော့တော့ ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်မယ်တော့ မထင်ပါဘူးလေ..)
Faith Evans နဲ့ 112 ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေက ပူးပေါင်းပါဝင် ထားကြပါတယ်။
နားထောင်နိုင်ဖို့ အောက်မှာ Link ၂ခု ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမတခုကတော့ သီချင်းရဲ့ Official Music Video ဖြစ်ပြီး
နောက်တခုကတော့ Live ဖြစ်ပါတယ် .. Live Performances တွေမှာ R’n’B Vocal skills တွေ ပြထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lyrics ကတော့ အောက်ကအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သည်နာမည် ကိုတော့ သည်ဘက်ခေတ်မှာ နည်းနည်း စိမ်းမယ် ထင်ပါတယ်။
(ကျနော်လည်း ခပ်မေ့မေ့ ဖြစ်နေလို့ မနည်း ပြန်ဖော်စဉ်းစား ထားတာပါ)
အမှားပါရင်လည်း ပြင်ပါ။ သည် သီချင်းလေးကိုတော့ မြန်မာပြည် Rap လောက ရဲ့ ခေါင်းကိုင် လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကိုမျိုးကျော့မြိုင်
သီဆိုထားတာပါ…။ အပေါ်က “I’ll be missing you” ရဲ့ Copy ဖြစ်ပါတယ်။
သည်ဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်း သည်သီချင်းကို “၀င်သက် ထွက်သက်များ ” ဆိုတဲ့နာမည် နဲ့ ကျော်ကြားပါတယ်။
Melody တေးစာသားတွေကို ဦးသစ်မင်း က ရေးပေးတာ လို့ သိရပြီး အားဖြည့် သီဆိုပေးထားတာကတော့ အန်တီဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Original သီချင်း MTV က ကမ်းခြေမှာ ရိုက်ထားတာလို့တော့ မှတ်မိပေမယ့် ပြန်ရှာမရလို့… ကျော်သူစိုး စီစဉ်တဲ့ပွဲက Live ကို
အောက်က Link မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(မြန်မာသီချင်း Lyrics တော့ ချမရေးတော့ဘူး ညော်…)
ဒါကတော့ သွားလေသူ မီဂါစတား မင်းသားကြီး ၀င်ဖျက်ဆီး.. အဲ..အဲ … ၀င်ဆိုထားတဲ့ version ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ နှစ်သက် တဲ့ ဂီတဟာ Rock ပဲဖြစ်ဖြစ် Rap ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..။
ဒီသီချင်းကတော့ အတော်ကို လွှမ်းမိုးမှု ရှိပြီး နားဆင်ခံစားသူအတွက်ရော လေ့လာဆည်းပူးမှုအတွက်ပါ
အတော်လေး ကျေးဇူးကြီးဖူးတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: Prince ဆိုထားးတဲ့ သီချင်းး ရဲ့ မြန်မာ သီချင်း ကို ပြောနိုင်ရင်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: Prince ရဲ့ ဘယ်သီချင်းလဲဗျ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မှားတာဟေ။
စတင်း ရဲ့ “Every Breath You Take” သီချင်း ဗားရှင်းကို ပြန်ဆိုတဲ့ မြန်မာသီချင်းကို မေးတာ…
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ် နဲ့တော့ ဝေးသဗျာ
ဦးကျောက်ခဲ says: P. Daddy ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေက Somalian တွေလို့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ပြောဖူးတယ်…
အမှန်ပြောရရင် P. Daddy ကို အဲသည့်သီချင်းနဲ့မှ စ သိတာဗျ…
စိတ်အဝင်အစားဆုံးက J. Lo ကို တွဲပြီး ကန်ချခဲ့တာပဲ… အား ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သူ့ပါဆင်နယ် အကြောင်းတော့ သိပ်မသိဘူးဗျ…
ဂျေ လို ကြီး နဲ့ ကတော့ …ဟီးဟီး….
P.Daddy အကောင်းအတိုင်း ကျန်ခဲ့ပြီး
မာ့ခ် အန်သိုနီ မျောက်ခေါင်းဖြစ်ကျန်ခဲ့တာပဲ ပြောစမှတ် တွင်တော့တယ်..
Courage says: Puff Daddy ရဲ့ i’ll be missing u က The Police ရဲ့ every breath you take ကို ယူထားတယ် ဆိုပေမယ့် melody frame နဲ့ စာသား နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်းလောက်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းတော်တော်များများက puff ရဲ့ စာသားတွေပါ။ The police ရဲ့သီချင်းကို ကော်ပီလုပ်တယ်ဆိုတာထက် မူရင်းနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ရသတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ နှစ်ပုဒ်လုံးကို အတော်ကြိုက်ပါတယ်။ The police က သူချစ်သူကို ဘယ်လိုချစ်ကြောင်း ဘယ်လိုလွမ်းကြောင်းကို ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ပြောခဲ့သလို Puff ကလဲ သူ့သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုသတိရကြောင်း (ဗမာလိုပြောရရင်တော့) ဘယ်လို အမျှတွေပေးနေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတာက သံစဉ်တစ်ခုတည်းမှာ အရသာနှစ်မျိုးရသွားစေလို့ပါ။
အဲ… ၀င်သက်ထွက်သက်များရဲ့ မူရင်းဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့သီချင်း ခေါင်းစဉ် “အပြာရောင်နေ့ရက်များ”ကို သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဟုတ်တယ်ဗျ..
ကျနော် ပြောတယ်လေ chorus တပိုဒ် ကိုပဲ ယူပြီး အဲသည်မှာ watching ကို missing ပဲပြောင်းတယ်ဆိုတာ..
ကျန်တဲ့ rapping တွေ အကုန်က P.Daddy ဖြည့်ရေးတာ…
ရသတော့ တော်တော်ကွဲသွားတာ အမှန်ပဲဗျ…
မြန်မာသီချင်းကတော့ .. .မင်းသားကြီး သီချင်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ
ကိုမျိုးကျော့ သီချင်းလုပ်ပါ…. ဟီးဟီး…
တချို့သီချင်းတွေက အော်ရီဂျင်နယ် တိုင်တယ်လ် ထက် chorus က စာလုံးတလုံးလုံးကို
ခေါင်းစဉ်ပဲလို့ ပရိတ်သတ် စွဲသွားကြတာတွေ ရှိတတ်တယ်ဗျ..
၀င်သက်ထွက်သက် ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း…
ဥပမာ တင့်လှပေဟန် လို သီချင်းမျိုးပေါ့ဗျာ…
သူ့ခေါင်းစဉ်က သပ်သပ်ရှိတယ် (မေ့နေပြီ)
တင့်လှပေဟန် ဆိုတာ သည်သီချင်းကို ဇာတ်ဝင်တေးသုံးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရဲ့ နာမည်…
Courage says: ဟုတ်တယ်ဗျ။ သီချင်းစာသားနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့သီချင်းဆို သီချင်း chorusထဲက စာသားကိုပဲ မှတ်မိကျတာများတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: အစ်အူးယီက ငှစော်ကွ….
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖြူဖြူကျော်သိန်းလောက် ဘယ်အဆိုတော်မှ မတော်ရေးချ မတော်…
Mike says: .သီချင်းတွေတော့ကြားဖူးပါတယ်…မေ့နေတာတောင်ကြာပေါ့..ဂွတ်
မြစပဲရိုး says: . အော …. ဂလိုလား။